Digniin amni oo laga soo saaray Koonfur Galbeed! – Hornafrik Media Network
Digniin amni oo laga soo saaray Koonfur Galbeed!
By HornAfrik	 On Oct 15, 2018
HornAfrik-Qaar ka mid ah Senaterada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doortay Deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta la hadlay Warbaahinta ka hadlay Diyaar garowga looga jiro doorashada Madaxtinimada ee Maamulka Koofur Galbeed oo dhawaan la filayo in ay ka dhacdo Magaalada baydhabo.
Mudanayaasha ayaa ka digay in doorashadda Madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed in lagu sameeyo Faragalin xilli maalmihii ugu dambeeyay ay soo ifbaxayeen in ay jiraan xubno ay wadato dowladda Soomaaliya oo Musharaxiin ah, islamarkaana jooga Gudaha Magaalada Baydhabo.
Xubnahan ka tirsan Sanetarada Aqalka Sare ee laga soo Doortay Deegaanada Koofur Galbeed ayaa Waxa ay sheegeen in ay muhiim tahay in Ammaanka Magaalada Baydhabo si weyn loo adkeeyo,islamarkaana waxaa ay Musharaxiinta uga digeen in ay dhibaato ka abuuraan deegaanada Koonfur Galbeed.
Dhaawacyada qaar ee qaraxyadi Baydhabo oo Muqdisho lagu daweynayo.
dowladda Soomaaliya oo markale soo saartay Go’aan lala yaabay!